सेवा तथा बस्तु खरीद गर्दा नगद फिर्ता पाईने काईदाको उपाय | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर सेवा तथा बस्तु खरीद गर्दा नगद फिर्ता पाईने काईदाको उपाय
सेवा तथा बस्तु खरीद गर्दा नगद फिर्ता पाईने काईदाको उपाय
पुस ३०, काठमाडौं । अब ग्राहकहरूका लागि बस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्दा जम्मा कारोबारको १० प्रतिशत (क्यास ब्याक) रकम फिर्ता हुने भएको छ । प्रत्येक ग्राहकले अस्पताल, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, सपिङ् सेण्टर लगायतका सेवा तथा वस्तुको भिसा कार्डबाट भुक्तानी गर्दा भोलीपल्टै ग्राहकको खातामा उक्त रकम फिर्ता हुने भएको हो । तर ग्राहले आफ्नो खल्तीबाट भुक्तानी गर्दा यस्तो छुट पाउन सक्तैनन् । यसकालागि ग्राहकले तोकिएका ११ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको भिसा कार्ड मार्फत मात्र भुक्तानी गर्न पर्ने हुन्छ ।
यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न भने सेञ्चुरी, ग्लोबल आईएमई, कुमारी, महालक्ष्मी, मेगा, मुक्तिनाथ विकास बैङ्क, एनसीसी, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट, राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क, सानिमा बैङ्क र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैङ्कका भिसा कार्ड प्रयोगकर्ताले मात्र यस्तो क्यास ब्याक अफर उपयोग गर्न पाउनेछन् । यो सुविधा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको नेतृत्वमा रहेको भिसा कार्ड सर्भिस प्रदायक उक्त बैङ्कहरुले ल्याएका हुन् ।
यो कारोबारको १० प्रतिशत क्यास ब्याक अफर माघ महीनाभरी नेपाल भरको ४ हजार ५ सय ओटा पोईन्ट अफ सेल (पिओएस, पोस) भएकाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसमध्ये २ हजार ओटा पल्स मेसिन नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्ककोे नेटवर्कमा आवद्ध रहेका छन् । यसअघि दशैं तिहार तथा छठलाई लक्षीत गरि करीब ५ महीनासम्म ल्याएको यस्तो अफर योजनाबाट करीब ५२ प्रतिशत खरीदकर्ताको सङ्ख्या बढेपछि फेरी यसलाई बजारमा ल्याएको बताएको छ ।
नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैङ्क लिमिटेडकी कार्ड सेण्टर प्रमुख रिना चन्दका अनुसार एटिएमबाट निकालेको पैसा पर्समा राखेर खर्च गर्ने ग्राहकलाई यस्तो पर्स ट्रान्जजेक्सनलाई दुरुत्साहन गर्न भिसाकार्ड भुक्तानी गर्दानगद फिर्तासहितको योजना ल्याएका हो । ‘ग्राहकले तोकिएको ठाउँबाट कार्डबाट कारोबार गर्दा एकपटकमा कम्तिमा ५ सयदेखि १० हजारभन्दा माथी सामान खरीद गर्दा र बिल भुक्तानी गर्दाको १० प्रतिशत रूपैयाँ आफ्नो खातामा सुरक्षित पाउने छन् । जस्तै ग्राहकले उक्त भिसा कार्ड मार्फत रू. २५ सयको भुक्तानी गर्दा रू. २ सय ५० नगद फिर्ता पाउने छन् ।